धुम्बाराहीमा भीम रावलको ईन्ट्रीपछि नयाँ प्रस्ताव, ओली मञ्जुर ! « Ok Janata Newsportal
धुम्बाराहीमा भीम रावलको ईन्ट्रीपछि नयाँ प्रस्ताव, ओली मञ्जुर !
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका दुई पक्षबीच धुम्बाराहीमा भेटवार्ता जारी छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आग्रहमा आजको भेट तय भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हुने भनिएको भेट माधव पक्षले धुम्बाराहीमा माग गरेपछि ओली त्यहाँ पुगेका छन् ।